Otu esi eme nnọkọ AMA na-akpakọrịta na YouTube? - YTpals
Ịre ahịa vidiyo bụ otu n'ime usoro mgbasa ozi kachasị ewu ewu na nke dị mkpa nke 2022. Ọ dịghị ihe na-ele anya dị ka vidiyo dị mma. Enwere ọtụtụ ohere maka ndị nwe azụmahịa, ndị ọkachamara SEO, na ndị na-ere ahịa iji gosipụta ihe okike ha na ọdịnaya vidiyo ha. O nweghị ụkọ ohere, ma ị ga-ama ka ị ga-esi jiri ihe ndị a mee ihe.
AMA ma ọ bụ jụọ m ihe ọ bụla vidiyo bụ otu ụzọ ahụ. Ị nwere ike ịmepụta nnọkọ AMA na-adọrọ adọrọ na YouTube. N'ime ntuziaka a, anyị ga-elekwasị anya na ịmepụta vidiyo ndị a iji wulite ntụkwasị obi ika gị ma dọta okporo ụzọ na webụsaịtị gị:
Mepụta ndepụta ajụjụ ndị nwere ike
Mgbe ị na-akwado maka nnọkọ AMA na YouTube, ọ dị mkpa ịmalite site na ịmara ndị na-ege gị ntị na ịmepụta ajụjụ ole na ole dabere na igwe mmadụ gị. Yabụ, ọ bụrụ na ika gị na-enye ọrụ SEO na ndị na-ege gị ntị nwere ndị ahịa ntinye ọkwa, ịchọrọ ịmepụta ndepụta nke FAQs gbasara isiokwu ahụ.
Yabụ, ị ga-adị njikere maka ihe ọ bụla. Nọgide na-ahụ maka akụkọ kachasị ọhụrụ na ọnụ ọgụgụ gbara akara gị gburugburu. Ugbu a, otu ihe gbasara nnọkọ AMA na YouTube bụ na ha nwere ike nweta nkeonwe. Tupu nnọkọ ahụ, ị ​​kwesịrị ịkwado onwe gị maka ajụjụ ụfọdụ na-akpasu iwe ma debe oke. Enwere ajụjụ ụfọdụ ị nwere ike ịza na ndị ọzọ ị na-adịghị. N'ụzọ ọ bụla, debe nzaghachi gị kpọmkwem na nkenke.
Kwalite nnọkọ AMA
I kwesịghị ịhazi YouTube -ebi Oge AMA n'oge a. Ịmepụta nke a n'etiti ndị na-ege gị ntị n'oge ikpeazụ nwere ike ịbanye na vidiyo dị ogologo na nke dị jụụ ebe ọ dịghị onye na-ajụ ajụjụ. Ị ga-amalite na-akwalite nnọkọ ahụ ozugbo i nwere ike ka ndị na-ege gị ntị nwee oge zuru ezu iji kwado ajụjụ ndị ha chọrọ ịjụ gị. N'ụzọ dị otú a, ha agaghị na-akpachapụ anya na-agbalị iche maka ihe. Ịchọrọ ka nnọkọ AMA gị bụrụ nke eziokwu, mkparịta ụka mepere emepe, yabụ ị ga-enye ndị bịara gị isi. Ọ bụrụ na ị kpọta onye gị na ya nso, ndị mmadụ nwere ike ịnụ ụtọ ịjụ ha ajụjụ n'oge vidiyo, nke ga-emekwa ka atụmanya maka mmemme gị dịkwuo elu.
Ugbu a, dabere ma nnọkọ YouTube AMA gị bụ naanị otu vidiyo ma ọ bụ akụkụ nke mkpọsa, enwere ụzọ dị iche iche ị nwere ike isi kwalite ya:
Peeji ndebanye aha
Email na -eso
Ị ga-ahụrịrị na vidiyo AMA gị na-emekọrịta ihe. Ma ka i wee mee otu ihe ahụ, i kwesịrị ịhụ na ndị na-ege gị ntị dị njikere ịgwa gị okwu ozugbo.
Jụọ ajụjụ n'ụzọ dị iche iche
Ị nwere ike na-echegbu onwe gị na nnọkọ AMA gị ga-agwụ agwụ ebe ndị mmadụ agaghị enwe ajụjụ ọ bụla ịjụ gị. Iji hụ na nke a emeghị gị, ị ga-atụle na otu ị na-ajụ ajụjụ dị mkpa. Kama ịsị naanị ajụjụ mechiri emechi, dị ka — Ọ nwere onye nwere ajụjụ ọzọ?, ị nwere ike ịhọrọ ajụjụ a kapịrị ọnụ, dị ka — Ọ nwere onye nwere ajụjụ gbasara mkpọsa m na-abịa? Ọ bụrụ na ị ga-achọ ka gị na ndị na-ege gị ntị nwetakwuo onwe gị, ị nwere ike ịmalite ikwu banyere ahụmahụ onwe onye dị mkpa, ajụjụ ndị a ga-esochikwa.
Ọ dị mkpa iburu n’obi na n’agbanyeghị na ndị na-ege ntị jụrụ ajụjụ ahụ, i nwere ike ime ka ha jụọ ajụjụ ndị ị chọrọ ịza. Site n'ịgbanwe okwu nke ajụjụ gị yana site n'imeghe oghe, ị nwere ike ime ka ọtụtụ mmadụ jụọ ajụjụ.
Yabụ, ndị a bụ ụzọ ole na ole ị nwere ike isi mee nnọkọ AMA na-etinye aka na YouTube. Ọ bụrụ na ị na-echegbu onwe gị maka ọnụ ọgụgụ ndị na-eso ụzọ gị, ị nwere ike iru eru YTpals. Site na ọrụ ha, ị ga-enwe ike ịnweta ndị debanyere aha YouTube n'efu, mmasị YouTube efu, na nkwupụta YouTube efu. Ọ bụrụ na ịchọrọ uto ngwa ngwa yana mmụba na mmasị na nlele, ị nwere ike ịhọrọ maka ọrụ adịchaghị ha.
Otu esi eme nnọkọ AMA na-akpakọrịta na YouTube? nke ndi edemede YTpals, 28 March 2022
Ndụmọdụ ndị dị elu maka Adsmepụta Mgbasa ozi bompa YouTube
YouTube bụ otu n'ime usoro ịre ahịa dị ike maka ụdị nke oge a, n'agbanyeghị agbanyeghị ogo ha. Si ụdị na-agbalị iru ha na mpaghara na-ege ntị ndị chọrọ ka onwe ha…
Na-eme vidiyo vidiyo 360 maka YouTube
Ọ bụ na Jenụwarị 2015 ka YouTube malitere ịgbanye usoro nkwado maka vidiyo ogo 360, dị na ntanetị ya na nyiwe ya. Nke ahụ mara mma nke ukwuu n'ihi na ọ bụ eziokwu reality